Natsangana tamin'ny 1995, HANGZHOU TONNY ELECTRIC & TOOLS CO., LTD.dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy fitaovam-pamokarana herinaratra automotera ao Sina. Ny orinasa anay dia ao amin'ny Xianlin Industrial Zone, Yuhang District, Hangzhou 311122, Zhejiang manana tany 20000 metatra toradroa ary 15,000 metatra toradroa faritra.
Ny orinasanay dia manamboatra manokana ny famolavolana, ny fanamboarana ary ny fitsinjarana ny fitaovana sy fitaovana elektrika mandeha ho an'ny fiara, toy ny mpanamboatra bateria fiara, inverters, mpanomboka amin'ny fika, jiro fiasana, jiro beacon, mpankafy fiara, mpankafy DC, portable rivotra, pump air, auto vacuum, sns. manaova serivisy OEM sy ODM koa. Ny fahaiza-manao famokarana be dia be ny zon'ny fivoriambe 14 mahazatra, milina misy tsindrona mandroso, ary mpiasa mihoatra ny 450 no mpamatsy herinaratra famokarana herintsika.A isaky ny fanaraha-maso kalitao hentitra, manana laboratoara fitiliana matihanina isika izay manana fitaovana fisedrana mandroso sy fitaovana fanaraha-maso. Ny ekipa QC&QA matihanina dia afaka miantoka ny fanaraha-maso ny rafitra fanaraha-maso kalitao ISO9001: 2015. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa R&D misy injeniera efa za-draharaha 20 dia mamolavola vokatra famoronana vaovao ary mamatsy fiantohana ara-teknika amin'ny ankapobeny aorian'ny varotra.
Tototry ny orinasa
Habetsaky ny motera: 20 olona
Solosaina famolavolana: Solidworks, Pro / E, Rino, sns.
Manomeza OEM & ODM amin'ny mpanjifa araka ny santionany, sary na heviny; Manome tolo-kevitra ilaina amin'ny mpanjifa mba hitazomana ny kalitao ary mahafeno ny fepetra takian'ny tsena.
Ekipa Design Elektronika
Ekipa mpamorona rafitry
Ny fahindrana plastika: 100g hatramin'ny 2500g;
Habetsaky ny milina: 20+
Ny fahaiza-manaon'ny famokarana be dia be ny zon'ny fivoriambe 14 ary ny mpiasa mihoatra ny 450 no herintsika famokarana fototra, ny ekipa QC&QA matihanina dia afaka manome antoka ny fanatanterahana ny rafitra fanaraha-maso kalitao ISO9001: 2015.
Ny asa an-trano
Manana faritra misy trano fitehirizana 50 000 metatra tora-droa isika, mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fitahirizana azy
sy ny fanaterana.
System: Ny rafitra ERP dia nampiharina nandritra ny vanim-potoana iray.
Nitana ny votoatiny
Manana ekipa lojika efa za-draharaha izahay. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana traikefa mihoatra ny 15 taona
Azontsika atao ny manantona kitapo 3x40HQ amin'ny fotoana mitovy.
Latin'ny ny vavahady
Izahay dia namelatra ny vokatra maoderina, ary manompo ny mpanjifantsika amin'ny tsenan'izao tontolo izao. Ny mpanjifantsika manan-danja indrindra dia mankafy malaza hatrany eto amin'izao tontolo izao, toy ny Wal-Mart, Autozone, Company Scotts, Advance Auto Parts ary Lidl sns.